I-Semalt Expert: I-Google's Project Shield isiza ukusinda i-Attack esuka kwi-Hackers
Abantu bafanele baqale ukuqaphela ixabiso elikuyo amabhizinisi amakhulu. EnkuluUmzekelo yilokho iGoogle eyenziwa ngumbhali weentatheli owayengumxhoba wohlaselo olukhulu lweDDoS. Inkampani iqhutywe kwaye ihlawulise ikhompyutha yayo engabonakaliyoamandla okubeka i-hick ekupheleni.
UBrian Krebs ngumlondolozi wokhuseleko lwezilwanyana. Ukuhlaselwa kwaqala xa wavezaiinkqubo zorhwebo ezingekho phantsi kweqela elinye, ophinde wabuyisela ngokukhupha i-DDoS (ukuchaswa kwenkonzo-nkonzo) ekuhlaselweni kwenkqubo yakhe.I-DDoS ayintsha njengabagqithisi basebenzise ngezikhathi ezithile. Nangona kunjalo, eli lithile liye lahluke, kwaye i-hacks yayinamandla kunokubananini. I-Krebs iyavuma ukuba ijongene nohlaselo lwe-DDoS ngaphambili, kodwa akukho nto yalolu hlobo.
I-Artem Abgarian, i iSemalt Umphathi oyiNtloko uMpumelelo weMathengi, ukholelwa ukuba isizathu sokuba abahlaseli banezixhobo ezininzi kunanini ngaphambiliukuba bahlasele. Ekuqaleni, iithagethi ezidume kakhulu zazingama-PC e-Windows. Babeya kubayalela ukuba baqondise ugaxekileisithuthi kwiziko lexhoba ngenjongo yokonkqoza ngaphandle. Ngeentlobo ezahlukeneyo zeekhompyutheni ze-intanethi, abahlaseli banokuezininzi iindlela zokuzikhethela.
Kwimeko ye-Krebs, abagculi bebenzisa iibhentshi ukuze baqalise ukuhlaselwa. Emva kokowabakhoboka kwiIoT (i-intanethi yezinto) izixhobo zeblogger. Bekuninzi iikhamera ze-IP, ii-routers, kunye ne-digital video recorders,zonke ezikwazi ukufikelela kwi-intanethi. Uninzi lwezixhobo ezikhethiweyo zineephasiwedi ezibuthakathaka okanye ezinzima ukuzikhusela ekungeneni.
Iwebhusayithi ye-Krebs ngumthombo obalulekileyo wolwazi kubaphulaphuli bakhe kwi-intanethiloluntu ukhuseleko. Ukusebenzisa iindlela ezahlukeneyo ezifumanekayo kubo, njengoko kuboniswe ngasentla, bakwazi ukukhangela isayithi, kwaye baqinisekise ukubayahlala phantsi ngonaphakade. Ukuhlaselwa kwe-DDoS kubagxeki yindlela entsha yokucandwa. Ukuhlaselwa kwagcina ulwazi kubaphulaphuli.
Ngeli nqanaba, umntu unokuzibuza ukuba iGoogle ifaneleka kuyo yonke le nto. Enye yeUkuhlaziywa kutshanje kwiGoogle kukuba baqalise "i-Project Shield". Isicwangciso seprojekthi siza kukuhlangula kwiincwadana ezinjalonjengeKrebs. Ibavimbela ukuba bafumane ukuhlaselwa kweDDoS kwiiwebhusayithi zabo.
I-Shield yeProjekti ikhokhelela umgcini-ntatheli ngamaseva ayo ukuze abasebenzise ukuba bathathenayiphina indlela enobungozi ejoliswe kwiwebhusayithi ngenjongo yokuyithintela. Le nkqubo ayizuzisi nje kwiintathelikuba lixhoba labaxhasi. Ukusetyenziswa kwayo kubuye kwandiswe kumazwe anokuphindaphindiweyo anokuqulathwe ngokusetyenziswa kwe-DDoSoorhulumente.
Ekuqaleni, i-Krebs inkontile inkampani eyaziwa ngokuthi nguAkamai ukunyamekela umxholo wayo.Nangona kunjalo, inkampani yokuphathwa kwenkcazelo ayinakukwazi ukukhusela i-website ukusuka ekuhlaselweni okukhulu njengale. Enye inkampaniwatshela iKrebs ukuba uhlobo lweenkonzo uAkamai lunikeze luya kuhlawula i-$ 200,000 ngonyaka.
Ukunquma ibali elide elifutshane, ukuhlaselwa kwiwebhsayithi yeKrebs kukubonisaukubaluleka kwabantu kufuneka babekwe kwikhuseleko lewebhu. Ukuba umntu akayisebenzisi iGoogle kule njongo, ezinye iinkampani zinika iinkonzo ezifanayo.Ngokusebenzisa oku, abanikazi bewebhusayithi banciphisa umngcipheko wokuhlaselwa kweDDoS ngokugqithiseleyo, njengokuba abacebi bawasebenzisa njengendlela yokucimaizixhobo.